बाढी–पहिरो र एकीकृत बस्ती- विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ८, २०७६ सविता दवाडी
पछिल्लो समय शिक्षामा समावेशीकरणबारे बहस सुरु भए पनि दलित–गैरदलित शैक्षिक असमानताको खाडल कम हुन सकेको छैन । गरिबीका कारण शिक्षामा कम पहुँच हुने, विद्यालयसम्म पुगेकाहरूले पनि पढ्दापढ्दै छोड्नुपर्ने अवस्था छ । गैरदलितका तुलनामा दलित विद्यार्थीको विद्यालयमा उपस्थिति न्यून भएको र बीचमै पढाइ छोड्ने दर पनि दलितहरूमै बढी रहेको तथ्य नेपाल र भारतमा भएका थुप्रै अनुसन्धानले उजागर गरेका छन् ।
दलितका लागि निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति लगायतको व्यवस्था भए पनि प्राथमिक तहबाट निमावि, मावि हुँदै उच्च शिक्षासम्म पुग्दा दलित विद्यार्थीको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा घट्दै जाने गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४/७५ अनुसार ९ र १० कक्षामा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ११.१ प्रतिशत दलित छन् । यो संख्या कक्षा ११ र १२ मा ६.५ प्रतिशत मात्रै छ । यसले एकातिर आधारभूत तहमा ठूलो संख्यामा दलित विद्यार्थी औपचारिक शिक्षाबाहिर रहेको र अर्कातिर तहगत कक्षा बढ्दै जाँदा दलित विद्यार्थी घट्दै गएको देखाउँछ ।
उच्च तहमा पुग्दा त झन् उनीहरूको उपस्थिति १.४ प्रतिशत मात्रै छ । छात्रवृत्ति, राहत, अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा जस्ता दलितलक्षित विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै पढ्नैका लागि लाग्ने प्रत्यक्ष खर्च एकदमै न्यून भए पनि तल्लो तहदेखि नैपढ्दापढ्दै छोड्ने दर गैरदलितको तुलनामा दलितको किन बढी छ ? के कारणले गर्दा उनीहरू गैरदलितसरह शिक्षा प्रणालीमा आउन सकेका छैनन् ? मननयोग्य छ ।
परम्परागत पेसा, आर्थिक अवस्था र शिक्षा
अधिकांश दलित भूमिहीन छन् । उनीहरू आफ्नै व्यवसाय गर्नभन्दा निमेक गरेर बाँचिरहेका छन् । खेतीपातीको काम, बालिघरे/हलिया प्रथामा अल्झिएका दलितहरू नगण्य आम्दानीका लागि वर्षैभरि पसिना बगाउन बाध्य छन् । यस्तो कमाइबाट वर्षभरि धान्न धौधौ पर्छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
ऋण लिएबापत उनीहरू झन् श्रम शोषणमा पर्छन् । उनीहरूका परम्परागत ज्ञान, सीप र उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण र बढ्दो सहरीकरणको प्रभावले विस्थापित गरिरहेको छ । फलस्वरूप कृषि, संगीत, मनोरञ्जन, सरसफाइ, शिल्पकारी पेसाबाट पनि उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्न सकेका छैनन् । साथै, उनीहरू वैकल्पिक पेसा छनोट गर्न पनि स्वतन्त्र छैनन् । होटल, लज, पेयजन्य उद्योग–व्यवसाय कतिपयले छुवाछुतका कारण सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
परम्परागत पेसाले आर्थिक अवस्थालाई चुनौती दिएसँगै उनीहरूका सन्तानको शिक्षादीक्षामा पनि प्रभाव पारेको छ । परम्परागतभन्दा अन्य पेसा अँगालेका अभिभावकको आर्थिक अवस्था राम्रो पाइएको छ । तिनले आफ्ना बालबालिकालाई पनि उच्च शिक्षासम्म पढाउन सकेका छन् ।
दलित बालबालिकाको श्रम र शिक्षा
जनसंख्याको अनुपातमा बालश्रमिकको संख्या नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा उच्च छ । बालबालिकाले गर्नुपर्ने श्रम र शिक्षा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । गरिब परिवारका बालबालिका धेरैजसो विद्यालयमा भर्नै नहुने र भए पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने हुन्छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण दलितका बालबालिकामा समेत श्रमिकका रूपमा काम गरेर अभिभावकलाई सघाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अभिभावक पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनभन्दा काममा लगाउनै उपयुक्त ठान्छन् । औपचारिक शिक्षाले गरिबीलाई झन् विकराल बनाउँछ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा छ । बाली लगाउने, बाली भित्र्याउने जस्ता कामको चाप हुने समयमा दलित विद्यार्थीहरू कक्षामा नियमित हुन सक्दैनन् । पढाइ छुट्ने गरेकाले उनीहरू स्वतः कमजोर हुँदै जान्छन् ।
श्रमिकका रूपमा पूरै समय खट्नुपर्ने बालबालिका शैक्षिक प्रणालीभित्र समावेश हुनै सक्दैनन् । घरायसी काम गर्ने, मौसम अनुसारको काममा व्यस्त हुनुपर्ने बालबालिकाको विद्यालयसम्म पहुँच पुगे पनि पढाइलाई निरन्तरता दिने सम्भावना कम हुन्छ ।
विद्यालयको वातावरण र छुवाछुत
केही दशकयता विद्यालयको संख्यामाउल्लेख्य वृद्धि भएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् । विद्यालय जातीयता सम्बन्धी अन्धविश्वासलाई चुनौती दिने थलो पनि बनेको छ । यसले दलितको विद्यालय गतिशीलतामा पक्कै केही बढोत्तरी गरेको छ । विद्यालय दलितको परम्परागत पेसालाई परिवर्तन गर्ने साधन बनेको छ ।
यसकै कारण सम्भ्रान्त वर्गको दलितप्रति दृष्टिकोणमा केही लचकता आएको छ । अभिभावकमा पनि आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने जागरण आएको छ । तिनले बाह्य संसारबारे जान्ने–बुझ्ने मौका पाएका छन् । तर सबै दलितले यो फाइदा लिन सकेका छैनन् । त्यसको कारण हो— गरिबी, छुवाछुतको माखेसाङ्लो, पेसा छान्न नसक्ने बाध्यता । साथीभाइ र शिक्षकबाट हुने छुवाछुतका कारण पनि दलित विद्यार्थीहरू पढाइप्रति उदासीन रहने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
घरपरिवारबाट बाहिरिएपछि बालबालिका रमाउने, घुलमिल हुने ठाउँ विद्यालय नै हो । विद्यालय औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने थलो हो । विद्यालयको वातावरण विद्यार्थीको रुचि र दक्षता अनुकूल भए मात्रै सिकाइ सार्थक हुन सक्छ । शिक्षक, सहपाठी, कर्मचारी प्रशासन आदिको सकारात्मक व्यवहार पाए बालबालिका विद्यालयप्रति आकर्षित हुन्छन् ।
सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय जातीय विभेदमा कमी आएको भए पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा अझै साथीभाइ तथा शिक्षकहरू समेत सँगै बसेर खाजा खान हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ । कक्षाकोठामा शिक्षकहरूले दलितलाई होच्याउने खालका उखानटुक्काको प्रयोग गर्ने गरेको अनुभव कतिपय विद्यार्थीको छ ।
देशमा राजनीतिक–सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै राज्यको पुनःसंरचनामा समावेशीकरणको यत्रो बहस चलिरहँदा, छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको नेपालमा अझै पनि आमजनको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पूर्णतः परिवर्तन आउन सकेको छैन । देशको जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा ओगटेका दलितहरू समाजको मूलप्रवाहमा अझै पनि आउन सकेका छैनन् ।
रूढिवाद, अन्धविश्वास, परम्परागत रूपमा लादिएको छुवाछुतका कारण दलितहरू अझै पनि राज्यको स्रोत, साधन र सेवाबाट टाढै छन् । आमजनको ज्ञान, धारणा र व्यवहारमा सकारात्मकपरिवर्तन ल्याई जातीय विभेद हटाउन सकेमात्र दलित शिक्षा लगायतको मूलधारमासमेटिन सक्नेछन् ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१३